Football Khabar » आज ‘इएल क्लासिको’ भिडन्त : बार्सिलोनासँग ‘बदला’ लिने रियल मड्रिडको दाउ
आज ‘इएल क्लासिको’ भिडन्त : बार्सिलोनासँग ‘बदला’ लिने रियल मड्रिडको दाउ
युरोपियन क्लब फुटबलमा सबैभन्दा चर्चित र ठूलो भिडन्तका रूपमा लिइने स्पेनका दुई ठूला क्लब बार्सिलोना र रियल मड्रिडबीचको ‘इएल क्लासिको’ भिडन्त आज राति हुँदैछ । यो सिजन यी दुई कट्टर प्रतिस्पर्धी पहिलोपटक घरेलु लिगमा भिड्न लागेका हुन् । यसअघि दशौं सातामै हुने यो खेल विशेष कारणले स्थगित भएर आज हुन लागेको हो ।
खेल बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा आज राति नेपाली समयअनुसार ठीक १२ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ । यो खेल ला लिगाको अफिसियल फेसबुक पेजबाट लाइभ हेर्न सकिनेछ ।
‘हेड टु हेड’ मा को बलिायो ?
बार्सिलोना र रियल आज समग्रमा २४३ औं प्रतियोगितात्मक खेलका रूपमा भिड्न लागेका हुन् । उनीहरू हालसम्म अफिसियल र मैत्रीपूर्ण गरी कूल २७५ पटक भिडेका छन्, जसमा ३३ खेल भने मैत्रीपूर्ण हुन् । कूल खेलमा बार्सिलोनाले ११५ खेल जितेको छ भने रियलले ९९ खेल मात्रै जितेको छ । ६१ खेल बराबरीमा सकिएका छन् ।
आज घरेलु लिग ला लिगाअन्तर्गत सिजनको पहिलो खेलमा बार्सिलोना र रियल भिड्दा यो १७९औं लिग खेल हुनेछ । हालसम्म भएका १७८ लिग खेलमध्ये बार्सिलोना र रियल दुवैले समान ७२–७२ खेल जितेका छन् भने ३४ खेल बराबरीमा सकिएका छन् । रियललाई आज राति बार्सिलोनामाथि १००औं जित निकाल्ने अवसर छ ।
रियललाई क्याम्प नोउमा बदला लिने मौका !
आज बार्सिलोनाको घरमा उत्रिँदा रियल मड्रिड घरेलु टोलीसँग बदला लिने दाउमा हुनेछ । गत सिजन भोगेको नमिठो हारको पीडा रियललाई अझै छ । गएको वर्षको मार्च २ मा रियल ला लिगाको दोस्रो लेगमा आफ्नै घरमा ०–१ ले हारेको थियो । त्यसअघि भएको पहलो लेगमा बार्सिलोनाले रियललाई आफ्नो घरमा ५–१ को नमिठो हार चखाएको थियो । सो खेलमा बार्सिलोनाका लुइस स्वारेजले ह्याट्रिक नै गरेका थिए ।
आज रियल पुनः क्याम्प नोउमा उत्रिँदा उसको दाउ हुनेछ– अघिल्लो सिजनको ५–१ को हारको बदला लिनु । त्यसबेला रियलको प्रशिक्षक जुलेन लोपेटेगुई थिए । तर, यसपटक रियलको टोली जिनेदिन जिदानको हातमा छ । जिदान उनै प्रशिक्षक हुन्, जसले अघिल्लो कार्यकालमा बार्सिलोनालाई लज्जास्पद हार चखाइसकेका छन् । आज पनि जिदान उस्तै कथा रच्ने दाउमा हुनेछन् ।
३ अंक र प्रतिष्ठाको लडाइँ !
आज क्याम्प नोउमा हुने सिजनको पहिलो भिडन्त बार्सिलोना र रियल दुवैका लागि ३ अंकका साथै प्रतिष्ठाका लागि पनि हुनेछ । हाल अंक तालिकामा बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा छ भने रियल दोस्रो स्थानमा छ । तर, दुवैको समान ३५–३५ अंक छ । गोलअन्तरमा मात्रै बार्सिलोना शीर्षमा छ ।
आजको खेल जितेर दुवै टोली लिग लिडर बन्नेमा दाउमा छन् । आजको विजेता टिम तत्कालका लागि उपाधितर्फ अघि बढ्नेछ । जसले जिते पनि एक टिम स्पष्ट ३ अंकले अघि बढ्नेछ, जुन उपाधि होडमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
त्यत्ति मात्रै नभएर आजको खेल प्रतिष्ठाको खेल पनि हुनेछ । रियल बार्सिलोनाको घरमा लामो समयपछि जित निकाल्ने दाउमा छ भने बार्सिलोना रियलमाथि दबदबा कायमै राख्ने योजनमा हुनेछ । पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा फर्किएको रियल आज क्याप नोउमा भारी पर्न सक्ने सम्भावना छ ।
यता, बार्सिलोना पनि अहिले लयमै छ । तर, पछिल्ला खेलमा रियलले जसरी कमब्याक गरेको छ, त्यो निकै शानदार छ । रियल आज बार्सिलोनाको घरमा यही लय र मनोबलका साथ उत्रिँदा बार्सिलोनालाई कडा टक्कर दिने पक्का छ ।
प्रकाशित मिति २ पुष २०७६, बुधबार ०९:५०